ခေတ်သုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မျက်ခြေမပြတ်လေ့လာခြင်း (Keeping Up with the English Language by Guy Perring) - Myanmar Network
ခေတ်သုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မျက်ခြေမပြတ်လေ့လာခြင်း (Keeping Up with the English Language by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on June 27, 2012 at 14:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အပြောင်းအလဲအလွန်မြန်တဲ့ လောကကြီးမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွင်းကို စကားလုံး၊ စကားစု အသစ်တွေ အမြဲဝင်လာပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးကို အမီလိုက် လေ့လာဖို့ ပိုမိုပြီး ခက်ခဲလာပါတယ်။
ယခုခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် ခေတ်နဲ့အညီ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ နည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ အမြန်နှုန်းကို အမီလိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံးကနေ အမည်မဖော်ဘဲ စာတိုကလေးတွေ ပို့နေတယ်ဆိုရင် “bluejack” အလုပ်ခံရတယ် ၊ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်အတွက် သီးခြားအသံတစ်မျိုးကို အသုံးပြုတယ် ဆိုရင် “sonic branding” လုပ်ထားတယ် စသည်ဖြင့် စကားလုံးအသစ်တွေကို သိရှိပြီး နေရာတကျ သုံးနှုန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးပေါ်တွေနဲ့ အမီလိုက်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကပ်စတမ်မာများနဲ့ ပြိုင်ဖက်များကို ပြသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ဆုံးပေါ် စကားလုံး အခေါ်အဝေါ် တွေကို သိဖို့ စာရွက်ပေါ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ အစဉ်အလာ အဘိဓာန်တွေကို အားထားလို့ မရဘူး။ သဘောသဘာဝအားဖြင့် သုတေသနလုပ်ပြီးမှ အဘိဓာန်မှာ ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမနှိပ်ရသေးခင်မှာဘဲ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းတွေက နောက်ဆုံးပေါ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဥပမာ နည်းပညာ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တဲ့ “podcasting” (စာရင်းပေးထားသူများထံ အင်တာနက်မှ အသံဖိုင်များဖြန့်ဝေခြင်း) နဲ့ “wiki” (မည်သူမဆို ၀င်ရောက်တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်) ဆိုတာမျိုးတွေက လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း အဘိဓာန်တွေထဲကို ရောက်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ အဘိဓာန်ထဲလည်း ရောက်ရော ခေတ်စားတဲ့ အကြောင်းအရာက ပြောင်းသွားမှာ။ အခုတော့ ကွန်ပျူတာထဲက စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်တဲ့စနစ်ကတောင် အဲဒီစကားလုံးတွေကို မသိသေးဘူး။
ဒါကြောင့် စကားပြောတဲ့အခါ နောက်ဆုံးပေါ် စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုသူတွေ အတွက် စကားလုံး ဝေါဟာရတွေ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
• သတင်းစာ ၊ မဂ္ဂဇင်း ၊ စီးပွားရေး စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ပါတဲ့ ဝေါဟာရသစ်တွေကို တစ်နေ့ တစ်လုံး မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။
• စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးကို တကယ်တမ်း သိဖို့ဆိုရင် အသံထွက်၊ စာလုံးပေါင်း၊ တွဲစပ်ဝေါဟာရတွေ၊ ဆက်စပ်သုံးစွဲပုံကို ဖော်ပြတဲ့ နမူနာဝါကျတစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် သိဖို့ လိုတယ်။
• ဘီဘီစီ ၊ စီအင်အင် စသည်တို့ မှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ နည်းပညာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီ သတင်းဌာနတွေက စကားလုံးတစ်လုံးကို သုံးပြီဆိုရင် ယေဘုယျအားဖြင့် အတော် အသုံးများလာပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
• စကားလုံး ကတ်ပြားတွေကို အသုံးပြုပါ။ တစ်ဘက်မှာ စကားလုံးသစ်ကို ရေးထားပြီး အခြားတစ်ဘက်မှာ ဘာသာပြန် ဒါမှမဟုတ် ရှင်းလင်းချက်ကို ရေးထားပါ။ ကတ်ပြားတွေကို အလုပ်သွားတဲ့အခါ ယူသွားပြီး အချိန်အားရင် တစ်ကတ်ချင်း ကြည့်ပေးပါ။ အစဉ်လိုက် မှတ်မိ နေတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကတ်ပြားတွေကို ရောနှောထားပါ။
• ဝေါဟာရ အသေအချာ တိုးစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မှတ်မိလွယ်အောင် အတိုကောက် သင်္ကေတတွေ သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးကို မှတ်မိဖို့ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ပုံသင်္ကေတတွေကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဥပမာ bluejacked ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မှတ်မိချင်တယ်ဆိုရင် Jack ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရတဲ့ အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ် ‘feeling blue’ ဖြစ် နေချိန်မှာ သူတပါး တယ်လီဖုန်းစကားပြောတာကို ကြားနေတဲ့ ရုပ်ပုံကို မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံက ထူးခြားလေလေ၊ စကားလုံးကို မှတ်သားရ လွယ်ကူလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ အလုပ်ခွင်သုံး စာတွေကို အကောင်းဆုံး ရေးသားနိုင်ဖို့ စာသင်ကျောင်း ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ်မှာ သင်ပေးလိုက်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းအချို့ကို အသုံးမပြုဘဲ ရှောင်ရှားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျော် executive (အရာရှိ) ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပေးစာရေးနည်း လမ်းညွှန်စာအုပ်ဟာ အဖေနဲ့ အမေ မမွေးခင်က ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ရည်ညွှန်းစာအုပ်တွေကို သုတေသနလုပ်၊ ရေးသားပြုစုပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အချိန်အင်မတန် ကြာမှ စာအုပ်ထွက်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ စာအုပ်ထွက်ပြီး ပြန်ရင် ကျောင်းပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့က ရွေးချယ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ထပ်ပြီး ကြာသေးတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ် ကြာသေးတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီထဲက ဘယ်နှစ်ခုလောက်ကို ခေတ်မီ လုပ်ငန်းသုံးစာတစ်စောင်မှာ ထည့်သုံးဖို့ သင့်တော်တယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ။
• I acknowledge receipt of (လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။)
• Waiting the favour of your early response (ဆောလျင်စွာ စာပြန်ခြင်းဖြင့် ကူညီမည်ဟု စောင့်ဆိုင်းလျက်)
• Please furnish details (အသေးစိတ်အချက်များ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်ဆည်းပေးပါ)
• Please be good enough to advise us (ကူညီသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးစေလိုပါသည်။)
• In compliance with your request (သင်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အနေဖြင့်)
အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေအားလုံးဟာ ခေတ်မမီတော့တဲ့ စာရေးသားနည်း လက်စွဲစာအုပ်တွေထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်။ ယခုခေတ် လုပ်ငန်းသုံး စာတွေမှာ မသုံးသင့်ဘူး၊ ရှောင်ရှားသင့်တယ်။ ခေတ်မီပါတယ်၊ အစဉ်အလာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတာ လျော့နည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အီးမေးလ်တွေ မှာတောင် မကြာခဏ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား အသုံးအနှုန်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဥပမာ အကြောင်းပြန်ပါ လို့ ပြောချင်တဲ့အခါ ခေတ်သုံးအတိုင်း “get back to me” လို့ ရိုးရိုးမရေးဘဲ “revert to the sender” လို့ ရေးတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းထဲက အဟောင်းအမြင်း အသုံးအနှုန်းတွေကို အစားထိုးဖို့ ခေတ်မီအသုံးအနှုန်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
• I have received/Thank you for ………… (လက်ခံရရှိပါတယ်/... အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
• I look forward to hearing from you. (အကြောင်းပြန်လာမှာကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။)
• Please send me details (ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အချက်တွေ ပို့ပေးပါ။)
• Please tell us (ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။)
• As you requested (မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်း)
(၁) bluejacked - receiving an anonymous text messages from another person’s mobile.
အခြားသူတစ်ဦး၏ လက်ကိုင်ဖုန်းမှ အမည်မဖော်ဘဲ ပို့သော စာတိုကလေးများကို လက်ခံရရှိခြင်း
(၂) Sonic branding -aspecific sound associated withaproduct or brand
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်အတွက် သီးခြားအသံတစ်မျိုးကို အသုံးပြုခြင်း
(၃) Podcasting - method of publishing audio programs via the Internet, allowing users to subscribe toafeed of new files (usually mp3s)
အသံဖိုင်အသစ်များ ထွက်သည့်အခါ လက်ခံယူလိုကြောင်း ကြိုတင်မှာယူထားနိုင်သည့် အင်တာနက်မှ အသံဖိုင်များဖြန့်ဝေသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု
(၄) Wiki -awebsite that any user can enter and edit (e.g. wikipedia)
မည်သူမဆို ၀င်ရောက်တည်းဖြတ်နိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက် (ဥပမာ ၀ီကီစွယ်စုံကျမ်း)
စကားချပ် - မူရင်းဆောင်းပါးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
British Council မှ Guy Perring ၏ Keeping up with the English language အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
Permalink Reply by Zaw Win on June 29, 2012 at 13:04
Please postalot like this.
Permalink Reply by Nyilinnthit Linnthit on July 4, 2012 at 9:54
To keep in touch with new words, such kind of article is very helpful to us. Thanksalot.
Permalink Reply by agmyint576 on July 4, 2012 at 10:10
Thank for your shearing , now I am 59 year old , using IT device , want your next next shearing . Thankalot .
Permalink Reply by Noreen on July 4, 2012 at 10:26
Permalink Reply by naychithitnwe on July 4, 2012 at 11:24
Permalink Reply by nway nway on July 4, 2012 at 12:30
Permalink Reply by hsu wai hnin on July 4, 2012 at 15:32
ွှThank you for saying that.
Permalink Reply by thesu on July 4, 2012 at 15:41
Permalink Reply by win win shwe on July 4, 2012 at 15:42
Permalink Reply by thet hnin on July 4, 2012 at 18:21
Permalink Reply by Gyit on July 5, 2012 at 9:10
Permalink Reply by War Lay on July 5, 2012 at 10:27
so good for posting this ........